कता हराए शिशिर भण्डारी ? ४० दिनदेखि अष्ट्रेलियामा यस्तो अवस्थामा रहेछन् (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
चर्चित युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा दुई महिनादेखि कुनै पनि भिडियो प्रसरण भएको छैन । शिशिर भण्डारीको लोकप्रिय यस च्यानलमा किन भिडियो आएन ? यसका सन्चालक कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी कहाँ हराए ? शिशिरलाई हिजो आज सामाजिक सन्जालमा यस्तै प्रश्नहरु आउने गर्दछन् । वास्तवमा शिशिर यतिबेला अष्ट्रेलियामा छन् । उनी एक साँगितिक कार्यक्रमका लागि मार्च १८ मा अष्ट्रेलियामा गएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रमहरुको चाप बढेपछि बिगत ४५ दिनभन्दा बढि देखि उनी उतै छन् । शिशिर यहि मे १९ मा नेपाल फर्कदैछन् ।
यसैबिच अष्ट्रेलियाबाट शिशिरको एउटा फोटो बाहिरियो । जुन फोटोमा शिरि बाटोमा बसेर डलर माग्दै गरेको अवस्थामा देखिन्थे । उनलाई त्यो फोटो र भिडियोलाई लिएर पनि धेरैले प्रश्न गरे । वास्तवमा यो फोटो र भिडियोको वास्तविकता अर्कै थियो । शिशिर अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको समसामयिक कथामा आधारित सर्ट फिल्म सम्बन्धमा अभिनय गरिरहँदा उनको उक्त फोटो र भिडियो कैद भएको थियो । शिशिर होलीको कार्यक्रमका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका थिए । उनले त्यसपछि सिड्नी, मेलवर्न, एडिलेड र ब्रिजबेनमा साँगीतक र सामाजिक कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरे । शिशिरको यो भिडयो हेर्नुस
७ वर्ष अघि क्यानडा भ्रमणको गल्तीमा कपिल शर्माविरुद्ध अहिले मुद्धा दर्ता, पर्यो गम्भीर संकट
मुम्बई, १९ असार : भारतीय टेलिभिजनका सफल कमेडियन कपिल शर्माविरुद्ध न्यूयोर्क कोर्टमा उजुरी परेको छ
काठमाडौं, १९ असार : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले बन्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट
चलचित्र‘ प्रसाद २’ को घोषणा, निश्चल बस्नेतको ठाउँमा अर्पण थापाको प्रवेश
काठमाडौं : सुदर्शन थापाको निर्देशनमा सामाजिक र प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘प्रसाद २’ निर्माण हुने भएको
नयाँ फिल्म ‘शमशेरा’लाई लिएर चर्चामा रणवीर कपूर
मुम्बई, १९ असार: बलिउड अभिनेता रणवीर कपूर हालका दिनमा नयाँ फिल्म ‘शमशेरा’लाई लिएर चर्चामा छन्
काठमाडौँमा १४ जनामा हैजा देखियो,एक जनाको अवस्था अत्यन्त जटिल देखिएपछि आइसियूमा राखेर उपचार गरिदै
१०९ जीवित जनवारसहित विमानस्थलमा दुई भारतीय महिला समातिए